China Corten steel screen mveliso kunye nabathengisi | Hongyi
Kolu donga lobugcisa bentsimbi, sihlala sisebenzisa ubungakanani bokumelana ne-corrosion yentsimbi njengempahla eluhlaza, ngokusekwe kwipateni umthengi ayifunayo, siya kuyenza ngokusikwa kwe-lacer, emva koko ukuwelda kunye nokubhola, kwaye siyilungise ngesixhobo esenziwe kwangaphambili.
Isinyithi sangaphakathi nesangaphandle sixhoma iimbiza zeentyatyambo
Intsimbi yeCorten / yentsimbi enganyangekiyo neMozulu
Laser ukusika ezibuhlazarha-ngaphandle, Cutting, Welding, Hand wokucoca
Ubungakanani obahlukeneyo buyafumaneka, wamkelekile ukuba ubekho.
Isikwere, uxande, isilinda, imilo engaqhelekanga
imvelaphi, irusi okanye Paint eneminye imibala (njengombala omnyama, omhlophe, ect)
Uyilo ngentando ezikhoyo
Igumbi lokuhombisa ekhaya, igumbi, iofisi, ihotele, ibhari, njl njl
Emva kokuba onke amanyathelo egqityiwe, siya kuya unyango umphezulu. Kuqala siza kutshiza ulwelo lokuphendula kumphezulu wentsimbi, yenze irusi.Lo ayisiyiyo "irusi" yokwenyani, Xa onke amanyathelo egqityiwe, siya kupenda okanye sitshize ipeyinti yeoyile, ipeyinti ecacileyo, engekho-bala, ukukhusela ifuthe lomhlwa!
Yintoni ukugqitywa kwerusi yendalo?
Ukugqitywa kokugqwala kwendalo kuqala ngexesha lokuyilwa kwemveliso kwaye kuya kuqhubeka nokwandisa / ukurusa kugqityiwe okwahlukileyo ngokuxhomekeke kwindalo esingqongileyo. Ekuqaleni lo mhlwa ubonakala ungumgubo phezu komhlaba, kodwa ngokuhamba kwexesha umhlwa uya kungena kwisinyithi kwaye uguqukele kubunzima obunzima obukhe babekwa kumphezulu wesinyithi.
Ngeli xesha lotshintsho, ukuhambisa umbala othile kumhlwa kunokwenzeka. Ke ngoko asikukhuthazi ukubeka iimveliso zegadi yethu yentsimbi engenawo umgubo kwimigca ekhanyayo enemibala, kodwa kuxhomekeke kubuntununtunu bomntu kule nkqubo. Nangona kunjalo, singacebisa ukuba umgubo ugqibe ukugqwala. Yenziwe ngokugqitywa kombala we-matte o-4, obonisa imbonakalo ye-faux rust.
Inkqubo yesikhokelo sokuthenga
Inyathelo 1: ii-Pls zisazise isiteji sakho okanye ubukhulu bomlinganiso wekoteyishini. Siza kuphinda silinganise imiyalelo yokulinganisa.
Inyathelo 2: Nika umzobo wevenkile oneenkcukacha ukuqinisekiswa kwabathengi.
Inyathelo 3: Ukuveliswa kwakhona kwe-P. Ngeli xesha, siza kuthatha iifoto ukubonisa umthengi.
Inyathelo 4: Andizenzi iimveliso kumzi-mveliso wethu, jonga ubungakanani kunye nomgangatho weemveliso.
Inyathelo 5: Ukuhambisa ngenqanawa. Ukuba ufuna, sinokulungiselela ukuthunyelwa kwakho.
Iinkcukacha zokupakisha:Ukukhusela iimpahla, sipakisha iimpahla ubuncinci abathathu. Umaleko wokuqala ngumboniso bhanyabhanya, owesibini yibhokisi okanye ibhegi ephothiweyo, owesithathu yibhokisi okanye i-plywood case.Iglasi: ibhokisi yeplywood, Amanye amacandelo: agutyungelwe yingxowa ye-bubble eqinileyo, ukupakisha ebhokisini.
Iinkcukacha zokuhambisa: Iintsuku 7-10 Emva kokufumana idipozithi kunye nokuzoba isiqinisekiso.
Egqithileyo Uluhlu lweetyhubhu eziziingxande kuluhlu lwamaxande kuluhlu lwamaxabiso zetyhubhu yentsimbi